Brackish uhlelo ukwelashwa amanzi (HMJBKRO uchungechunge) - China Xi'an Homey Technology
Brackish uhlelo ukwelashwa amanzi (HMJBKRO uchungechunge)
okusezingeni eliphezulu usawoti kwenqatshwa brackish reverse Osmosis uhlelo 3000GPD Le yunithi isetshenziswa ukwelapha amanzi brackish nge TDS ka 7000ppm nge rate yokutakula kufika ku-70%. I conponents main ohlelweni yilezi multi abezindaba lemifanekiso, ocushiwe carbon lemifanekiso brackish amanzi kungeyona unit.With okusezingeni eliphezulu usawoti kwenqatshwa futhi ongaphakeme amandla sonsume, kubuye kube ukufakwa lula futhi uhlale umuhle. Umkhiqizo CE eqinisekisiwe nge izinga ezinhle. Isingeniso Omfushane: 1, Yokusebenzisa DOW FILMETEC software design ukubala bese belingisa, ...
Uhlobo: Brackish uhlelo ukwelashwa amanzi
Raw TDS amanzi: ngezansi 15000ppm
Amanzi lokukhipha TDS: esingaphansi 600ppm
Uzimele: Carbon steel
okusezingeni eliphezulu usawoti kwenqatshwa brackish Osmosis reverse ohlelweni 3000GPD
Le yunithi isetshenziswa ukwelapha amanzi brackish nge TDS ka 7000ppm nge rate yokutakula kufika ku-70%. I conponents main ohlelweni yilezi multi abezindaba lemifanekiso, ocushiwe carbon lemifanekiso brackish amanzi kungeyona unit.With okusezingeni eliphezulu usawoti kwenqatshwa futhi ongaphakeme amandla sonsume, kubuye kube ukufakwa lula futhi uhlale umuhle. Umkhiqizo CE eqinisekisiwe nge izinga ezinhle.
1, Sebenzisa DOW FILMETEC software design ukubala bese belingisa, ukuhlinzeka guidline theory for design
izinhlelo ezahlukene 2, design ngokuvumelana ukondla lizinga lemanti kanye efunekako, le B2K uchungechunge ziyasetshenziswa amanzi eluhlaza anosawoti 5000ppm-15000ppm. Uma okuqukethwe usawoti ingaphezu 15000ppm pls ukhethe SW uchungechunge ngoba amanzi asolwandle
3, abahlukile amanzi ahlanzekile esikhundleni kwedivayisi othomathikhi esikhundleni CONCENTRATE e ulwelwesi ngamanzi ahlanzekile lapho uhlelo eyeka zokunciphisa ukungcoliseka ulwelwesi, Ngakho-ke isikhathi ekuphileni isevisi kanye nezindleko eziphansi.
4, Carbon steel camera futhi engagqwali uzimele ukukhetha, amasondo ezihambayo ingafakwa ehlukile ukufakwa isimo
5, Insimbi steel futhi SCH80UPVC amapayipi nge high ukuqinisekisa ukuthi akekho ukuvuza kanye ukugqwala ongaphakeme ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu
Raw futha amanzi + Silica isihlabathi isihlungi + asebenzayo carbon isihlungi + sezingubo + Micron isihlungi + wegazi ophezulu futha + RO uhlelo.
Amandla kagesi kuyinto 220 / 380V, 50Hz / 60Hz engaphezulu ongakhetha kukho. Uhlaka carbon lensimbi kanye insimbi engagqwali ozikhethela.
HMJBK9RO seires- Ukwelapha amanzi zokusetshenziswa ne TDS esingaphansi 9000ppm
HMJBK15RO seires- Ukwelapha amanzi zokusetshenziswa ne TDS esingaphansi 15000ppm
1.DOW ulwelwesi 2.FRP ingcindezi isitsha 3.sediment isihlungi 4.SS centrifugal presure okusezingeni eliphezulu futha
5.cleaning uhlelo 6. wamanzi amasha esikhundleni uhlelo 7. carbon Uhlaka lwensimbi camera
8.PLC ukuzilawula ngokuzenzekelayo
1.multi-media isihlungi 2.activated carbon isihlungi 3.stainless Uhlaka lwensimbi